Maitiro ekugadzira mabhodhoro egirazi anonyanya kusanganisira:
① Raw zvinhu zvisati-kugadziriswa. Pwanya zvinhu zvizhinji zvegirini (quartz jecha, svutugadzike yesoda, limestone, feldspar, nezvimwewo) kuti uome madhayeti akasviba, uye bvisa simbi-ine zvinhu zvakasvibirira kuti ive nechokwadi chegirazi.
② Kugadziriswa kwezvinhu zve batch.
③ Kunyungudutsa. Iyo girazi batch zvinhu zvinopisa pamhepo tembiricha yakadzika (1550 ~ 1600 degrees) mudziva kiln kana choto kuti iite yunifomu, isiri-bubble, uye girazi remvura inosangana nezvinodiwa pakuumba.
④Forming. Isa girazi remvura mune fomu kuti ugadzire zvigadzirwa zvegirazi zvechimiro chinodiwa, senge mahwendefa uye nemidziyo dzakasiyana siyana.
⑤ Kurapa kupisa. Kuburikidza nekumisa, kudzima uye dzimwe nzira, kushushikana, kupatsanurwa chikamu kana kuchema mukati megirazi kunobviswa kana kugadzirwa, uye chimiro chegirazi chinoshandurwa.
二, musiyano uripo pakati pegirazi rakatsamwa uye girazi rinodzivirira pakupisa
1. Yakasiyana kushandiswa
Girazi rinopisa rinoshandiswa zvakanyanya mukuvaka, kushongedza, dhizaini yekugadzira mota (masuo, windows, madziro ekushongedza, kushongedzwa kwemukati, nezvimwewo), indasitiri yekugadzira fenicha (fanicha, nezvimwewo), imba yekugadzira midziyo yekugadzira indasitiri (TV sets, oveni, mhepo conditioners, firiji uye zvimwe zvigadzirwa).
Girazi rinodzivirira rinopisa rinonyanya kushandiswa muindasitiri yezuva nezuva zvinodiwa (zvine simba rinopisa girazi midziyo, inopisa girazi tema tafura, nezvimwewo), uye indasitiri yezvekurapa (inonyanya kushandiswa mune zveupfumi zvekurapa uye vanoedza kuva vatambi).
2. Yakasiyana tembiricha mhedzisiro
Kupisa rinodzivirira girazi imhando yegirazi ine yakasimba yekushisa kudzivirira kuramba (inogona kumira nekukurumidza kutonhora uye nekukurumidza tembiricha shanduko uye diki coefficient yekuwedzera kwemafuta), uye inoshandisa kupisa kwakanyanya (high strain tembiricha uye kupisa kupisa), saka mumawachi uye microwave oveni , kunyangwe kupisa kuchangoerekana kwaitika Kunogona zvakare kushandiswa zvakachengeteka kana kuchinjirwa.
Shanduko yechinguvana mugirazi rakatsamwa muvheni microwave inogona kukonzera kupwanya. Pakati pekugadzira girazi rakatsamwa, nekuda kweiyo "nickel sulfide" iri mukati, girazi rinowedzera nekufamba kwenguva uye tembiricha, uye mukana wekuzviputika. Hazvigone kushandiswa zvachose.
3. Yakasiyana nzira yekupwanya
Kana girazi rinodzivirira kupisa rikavhuniwa, rinofanira kutyorwa uye harizopararira. Girazi rinodzivirira kupisa harina njodzi yekuzviputika pachako nekuda kweiyo nickel sulfide, nekuti girazi rinodzivirira pakupisa zvishoma zvishoma rinotonhorera, uye hapana simba rekudzikisira mukati megirazi, saka rakatyoka Hazvizobhururuka.
Kana girazi rakatsamwa rikatyoka, rinobva raputika roenda. Munguva yekuedza, girazi rakatsveneswa rinogadzira prestress uye simba rekudzoreredza, saka kana ichinge yakanganisika kana kuputika, simba rayo rakaderedzwa rinoburitswa, voita zvidimbu zvakapararira, uye panguva imwechete Kuputika.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-29-2020